Qarax xoogan oo lala Beegsaday Ciiddamadda Djibouti ee Magaaladda Beladweyne – idalenews.com
Qarax xoogan ayaa waxaa lagu weeraray ciidamo ka tirsan kuwa Jabuuti ee ku sugan magaalada Beladweyne ee xarunta Gobalka Hiiraan.
Qaraxa ayaa waxa uu ahaa Bambo Nooceedu yahay kuwa Ramuudka laga hago, waxaana lala beegsaday Ciiddamadda Dowladda Djibouti oo Xilligaasi maraayay bartamaha Suuqa magaalada Beladweyne.
Goob jooge ayaa Shabakadda Soomaalidamaanta u xaqiijiyay in Qaraxa uu ahaa mid laga maqlaayay inta badan Suuqa magaalada Beladweyne, waxa uuna sheegay in Qaraxaasi uu ka dhashay Khasaara isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Cismaan Dubad Taliyaha ciidamada Dowladda Djibouti ee Gobalka Hiiraan,ayaa xaqiijiyay in Qaraxa uu ahaa mid u dhacay si lama filaan ah, waxa uuna Tilmaamay in Ahmiyadiisu uu ahaa in lagu xasuuqo Ciiddamadda Djibouti balse ay iminka ku dhamaadeen dad rayid ah.
Cismaan Dubad, waxa uu sheegay in Qaraxa uu geystay Wiil dhalinyaro ah oo Agagaarka goobta ku sugnaa, wuxuuna Sheegay in Qaraxa uu geystay Qasaaro aan sidaa u badneyn labo ruux oo shacab ah kana agdhawaa goobta qaraxa uu ka dhacay.
Qaraxa ayaa imaanaya iyadoo maalmahaani Ciiddamadda Dowladda Djibouti wadeen Hawlo isugu jiray, Tababaro iyo Hawlgalo waxa uuna sidoo kale ku soo beegmaya xilli dhawaan Maamulka uu shaaciyay inay bilaabi doonaan Hawlgalo lagu jabinaayo Maleeshiyadda Alshabaab.
Amisom iyo Dawlada oo heshiis muhiim ah gaaray iyo Shacabka oo ku farxay arintaasi